काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनी नेतृत्वको सरकारमाथि निकै गम्भिर खालका आरोपहरु लागेका छन् । सत्तारुढ दलभित्रका बहुमत सदस्यले नैओली स्वंय र उनी नेतृत्वको सरकार घोषित रुपमै ‘भ्रष्ट’ भएको बताईरहेका छन् ।
सत्तारुढ दलले नै प्रधानमन्त्री ओली र उनी नेतृत्वको सरकारमाथि यस्तो आरोप लगाईरहँदा अन्य राजनीतिक दलले भने मौनता साँधेको टिप्पणी भएको छ । सत्तारुढ पार्टीभित्रै घोषीत रुपमै ओली र ओली नेतृत्वको सरकार भ्रष्ट भएको भन्दै विकल्प खोजिएका बेला हामीले प्रतिपक्षी कांग्रेसको धारणा बुझ्ने प्रयास गरेका छन् ।
संसार न्यूज अनलाईनले यसै सन्दर्भमा कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद डा. डिला संग्रौला पन्त सँग केहि जिज्ञासा राखेको छ । संसार न्यूज अनलाईनका सन्देश अर्यालले नेतृ संग्रौलासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेकपाको बैठकमा प्रचण्डसहितका सचिवालय सदस्यले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीविरूद्व लिखित रूपमा नै संगीन आरोप लगाएका छन् । भ्रष्टाचार मुद्दा उठाएका छन् । यो विषयलाई कांग्रेसले कसरी हेरेको छ ?
नेकपाको बैठकमा प्रचण्डसहितका सचिवालय सदस्यले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीविरुद्व लिखित रुपमा लगाइएका संगीन आरोप जाहेज र यथार्थ परक छन् । राष्ट्रिय सरोकारका विषयसँग सम्बन्धीत रहेका आरोपहरु भएकाले यसमा सबैको चाँसो जोडिएको छ । सरकार सञ्चालन गर्दा देखिएको अनियमितता, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, अपराध, कुशासन, शान्तिसुरक्षा कायम गर्न नसक्नु आदिजस्ता कुराले प्रधानमन्त्री पूर्णं असफल भएका छन् ।
सरकार भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार र कमिसनखोरी नियन्त्रणको लागि आवश्यक कदम चाल्नुको सट्टा वाइड वडि विमान खरिद प्रकरण, सुरक्षण छापाखाना खरिद प्रकरण, यति होल्डीङसँगको अपारदर्शी संकास्पद र कारोबार, स्वास्थ्य सामान खरिदमा ओम्नी समुहसँग साँठगाँठ र बजेट सार्वजनिक गर्नुपूर्व गोप्य राख्नु पर्ने करको दर–रेट परिवर्तनलाई चुहाएर विद्युतीय सवारी र चकलेट आयातमा अनियमितता जस्ता प्रकरणमा मुछिएकाहरुको प्रतिरक्षा गरेर ओलीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गरेका छन् प्रष्ट हुन्छ । कोरोनाको महामारीको विरुद्व राष्ट्रिय एकताको साथ अगाडी बढ्नु पर्नेमा पार्टी विभाजन र सत्ताको खेलमा लागेर ओलीले राजनीतिक विवाद मात्र सिर्जना गर्नु भएन, कानून सम्वत विपत व्यवस्थापनको राज्य संयन्त्रलाई समेत निस्कृय तुल्याएका छन् ।
राष्ट्रियतासँग सम्बन्धीत विभिन्न मुद्दामा पनि ओली एकदमै कमजोर देखिएका छन् । उनले विदेश मामिला कुटनीतिमा नेपालको स्वतन्त्र नीतिसँग मेल नखाने व्यवहार देखाउँदै अयोग्यता प्रदर्शन गरी देशलाई क्षती पुर्याएका छन् । उनले द्वन्दकालीन मुद्धाहरुलाई राजनीतिक उदेश्यका निम्ती प्रयोग गरिरहेका छन् । समग्र राज्य सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री ओली पूर्ण असफल छन् भन्ने कुरा प्रष्ट छ । यस विषयलाई कांग्रेसले गम्भिर रुपले नै हेरेको छ । यी सबै विषयहरु यसभन्दा अगाडीनै प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संसदबाट सरकारसँग जवाफ मागेको थियो तर, यी सवै संघिन आरोपबाट जोगिन प्रधानमन्त्री ओलीले हठातमा संसद बन्द गराउने निर्णय गरे ।
प्रचण्डसहितका सचिवालय सदस्यले ओलीविरुद्व लगाएका आरोप जाहेज र यथार्थपरक छन् । ओली नेतृत्वको सरकार भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मात्रै डुबेको छैन्, समग्र राज्य सञ्चालनमा पनि असफल भएको छ । यो अवस्थालाई हामीले गम्भीर रुपमै हेरिरहेका छौं ।
सरकारका भ्रष्टाचारका मुद्दा नेकपाभित्र उठिरहँदा कतिपयले प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको भूमिकाप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन् । कांग्रेस किन सरकारको साँक्षी बन्यो भन्ने पनि छ नि !
सरकारमा भ्रष्टाचारका मुद्दा सत्तारुढ दलभित्र उठिरहँदा कतिपयले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको भूमिका प्रति प्रश्न उठाएको पाइएता पनि यी सबै सवालहरु नेपाली कांग्रेसले सदनमार्फत आफ्नो केन्द्रिय समितिको बैठक गरेर लिखितै रुपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै बारम्बार विज्ञप्ती जारी गरीसकेको छ । संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रतिपक्षको खबरदारीले मात्र सरकारलाई सही बाटोमा हिँडाउन सकिन्छ । यसैले कांग्रेस सरकारको साँछी बनेको छैन् र बन्दैन पनि । तर, सरकार आफै दिन प्रतिदिन अर्कमण्य, अनुदार, संवेदनहीन बन्दै गएको छ ।
के सरकारमाथि लागेका गम्भीर आरोपको जवाफ कांग्रेसले माग्छ ? सरकारमाथि यति गम्भीर आरोप लाईरहँदा संसद खुलाएर छलफल गर्नुपर्दैन ?
सरकारमाथी लागेका गम्भिर आरोपहरुको जवाफ प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले छिट्टै संसदको अधिवेशनको माग गरेर संसदबाट जवाफ माग्ने छ । साथै सडक र संगठनमार्फत पनि प्रतिवाद गर्नेछ ।
पूर्वमन्त्री एवं सांसद महेश बस्नेतले एक सन्दर्भमा ‘कोही दुधले नुहाएका छैनन्, हाम्राविरूद्व खोजीनीति गरे हामी पनि उनका विरूद्व खोजीनीति गर्छौ’ भन्ने भाषा प्रयोग गरेका थिए । कांग्रेसको नेतृत्व पनि आफ्ना विरूद्वका मुद्दा उठ्ने डरले अगाडि आउँदैन भन्ने टिप्पणी छ । यहाँलाई थाहा भएकै कुरा हो, थुप्रै भ्रष्टाचारका मुद्दामा कांग्रेसका नेतृत्व तहका नेताको नाम जोडिएको छ नि !
बस्नेत जीले दुराचारपूर्णं र आफ्नो गल्तीलाई ढाकछोप गर्ने योजनाअनुसार यस्तो भनेका हुन् । जसलाई यसअघि नै कांग्रेसले प्रष्ट शब्दमा विरोध पनि गरेको थियो । कांग्रेसले यसभन्दा अगाडी पनि पार्टीको राष्ट्रिय जागरणको अभियानमा भ्रष्टाचार विरुद्व सशक्त अभियान चलाईसकेको छ । पार्टीको महासमितिको बैठक केन्द्रीय समितिको बैठक एवं संसदमा नै ओली सरकारको औचित्य समाप्त भइसकेको भनाई सार्वजनिक गरिसकेको छ । भ्रष्टाचारको मुद्दामा कांग्रेसको नेतृत्व तहको नेताको नाम जोड्नु गलत छ ।
नेकपाको विवाद पार्टी विभाजनको तहसम्म जानसक्ने विभिन्न टिका–टिप्पणी सार्वजनिक भईरहेका छन् । तर, लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा पार्टी फुट्नु, विभाजित हुनु राम्रो कुरा भने हुँदै होइन । यसले समग्र शासन प्रणालीमा नै असर गर्दछ ।
नेकपाकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा, विवाद पार्टी विभाजनको तहसम्मै जानसक्ने चर्चा छ । नेकपा विवादबारे कांग्रेसको पार्टीगत धारणा चाहिँ के हो ?
नेकपाको विवाद पार्टी विभाजनको तहसम्म जानसक्ने विभिन्न टिका–टिप्पणी सार्वजनिक भईरहेका छन् । तर, लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा पार्टी फुट्नु, विभाजित हुनु राम्रो कुरा भने हुँदै होइन । यसले समग्र शासन प्रणालीमा नै असर गर्दछ । त्यसैले जिवन्त पार्टीभित्र उठेका विभिन्न सवाललाई पार्टीभित्रै संवाद, छलफल, बैठक गरेर समाधान गर्नु पर्दछ ।
तपाईँ प्रतिनिधि सभाको सांसदको भूमिकामा पनि हुनुहुन्छ, सत्ता चलाईरहेको नेकपाभित्र विवाद चलिरहँदा त्यसले देशलाई चाहिँ कत्तिको घाटा पर्याएजस्तो मान्नुहुन्छ ?
नेकपाभित्रको विवादले देशलाई निकै नोक्सानी गरिरहेको छ । देश कोरोनाको कहरले अक्रान्त छ । जनता रोग, भोक, शिक्षा, स्वास्थ, रोजगार नपाएर प्रताडित भएका छन् । तर, सरकारको ध्यान आफ्नै पार्टीको झगडामा केन्द्रित हुँदा राष्ट्रलाई ठुलै घाटा भएको छ । अहिले जनताले सरकारबाट सामान्य अपेक्षा पनि पुरा नहुने स्थिति छ ।
नेकपाको विभाजनले देशमा अस्थिरता निम्तिए पनि कांग्रेसलाई त राजनीतिक रूपमा फाइदा नै होला नि, होईन ?
नेकपाको विवादले देशमा अशान्ति, अस्थीरता निम्त्याईरहेको छ । यसले देश, जनता र कुनै राजनैतिक दललाई फाइदा एवं भलो गर्दैन । फेरि पनि भन्छु, राजनीतिक पार्टीहरुमा हुने टुटफुट र विभाजनले कसैलाई पनि असर गर्दैन् । अनि त्यसले देशलाई स्थिरता पनि दिँदैन् ।